maratidziro ekutaurisa enetiweki
Kuru Chengetedzo Network Ongororo Matekiniki
Network Ongororo Matekiniki
Network scanning inoreva maitiro ekuwana rumwe ruzivo uye kuita yakadzama yekubvuma kunoenderana neruzivo rwakaunganidzwa mu tsoka yekutsika .
Muchikamu chino, maitiro akati wandei anoshandiswa nechinangwa chekuona mauto, madoko, uye masevhisi mune yakatarwa network. Chinangwa chose ndechekuona kushomeka munzira dzekutaurirana wobva wagadzira chirongwa chekurwisa.
Mhando dze Network Network
Kuongorora kune mhando nhatu:
Port kuongorora - yaishandiswa kunyora open ports uye services
Network kuongorora - yakashandiswa kunyora IP kero
Kunetseka pakuvheneka - yakashandiswa kuwana huvepo hwekusagadzikana kunozivikanwa
Matekiniki ekutsvagisa mapoti anonyanya kubatsira kana zvasvika pakutsvaga madoko akavhurika. Maitiro ekuvheneka anomiririra akasiyana mapoka ayo anoshandiswa zvichienderana nemhando dzeprotocol. Ivo vakapatsanurwa muzvikamu zvitatu:
Kuongorora ICMP network services
Kuongorora TCP network services
Kuongorora UDP network services
ICMP kuongorora kunoshandiswa kuratidza zvishandiso zvinoshanda uye kuona kana ICMP inogona kupfuura nepakati pemoto.
Ping kutsva kunoshandiswa kuona huwandu hwe IP kero iyo yakarongedzwa kumashandisi anoshanda. Iyo inobvumira vabiridzi kuverenga subnet masiki uye kuona huwandu hwenhasi varipo mune subnet. Izvi zvinobva zvavabatsira kuti vagadzire hesera remidziyo inoshanda mu subnet.
ICMP Echo Kuongorora
ICMP Echo Scanning inoshandiswa kuona kuti ndeapi mauto ari kushanda mune yakatarwa network nekubaya michina yese iri mu network.
TCP yekubatanidza scan yakashandiswa kuona yakavhurika madoko pakapera iyo nzira nhatu yekubata ruoko. Iyo inoshanda nekumisikidza izere yekubatana uye wozoisiya iyo nekutumira RST packet.
Stealth scan inoshandiswa pakupfuura firewall uye matanda nzira. Iyo inoshanda nekumisazve iyo TCP yekubatanidza pamberi penzira nhatu-nzira kukwazisana kwapera, izvo zvakare zvinoita kuti kubatana kwacho kuvhurike.
Inverse TCP Mureza Kuongorora
Inverse TCP mureza scanning inoshanda nekutumira TCP yekuongorora mapaketi ane kana asina TCP mireza. Zvichienderana nemhinduro, zvinokwanisika kuona kana chiteshi chakavhurika kana chakavharwa. Kana pasina mhinduro, chiteshi chakavhurika. Kana mhinduro iri RST, saka chiteshi chakavharwa.
Xmas scan inoshanda nekutumira TCP furemu neFIN, URG, uye PUSH mireza yakaiswa kune chakanangwa mudziyo. Zvichienderana nemhinduro, zvinokwanisika kuona kana chiteshi chakavhurika kana chakavharwa. Kana pasina mhinduro, chiteshi chakavhurika. Kana mhinduro iri RST, saka chiteshi chakavharwa. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyi scan inoshanda chete kune UNIX inomiririra.
ACK Mureza Kuongorora Kuongorora
ACK mureza wekuferefeta scanning unoshanda nekutumira TCP yekuongorora mapaketi ane ACK mureza wakaiswa kuitira kuti uone kana chiteshi chakavhurika kana chakavharwa. Izvi zvinoitwa nekuongorora iyo TTL uye WINDOW munda weyakagamuchirwa RST packet musoro. Chiteshi chakavhurika kana kukosha kweTTL kuri pasi pe64.
Saizvozvowo, chiteshi chinotarisirwawo kunge chakavhurika kana WINDOW kukosha isiri 0 (zero). Zvikasadaro, chiteshi chinotarisirwa kunge chakavharwa.
ACK mureza wekuferefeta unoshandiswa zvakare kuona iyo yekusefa mitemo yeiyo tarisiro network. Kana pasina mhinduro, saka zvinoreva kuti statewall firewall iripo. Kana mhinduro iri RST, saka chiteshi hachina kucheneswa.
IDLE / IPID Musoro Wekuongorora
IDLE / IPID musoro wekutarisa unoshanda nekutumira spoofed kero kero kune chakanangwa kuti uone kuti ndeapi masevhisi aripo. Mune ino scan, vabiridzi vanoshandisa IP kero yemuchina we zombie yekutumira iwo mapaketi. Zvichienderana neIPID yeiyo packer (chidimbu chekuzivisa nhamba), zvinokwanisika kuona kana chiteshi chakavhurwa kana chakavharwa.
UDP scanning inoshandisa UDP protocol kuyedza kuti chiteshi chakavhurika here kana chakavharwa. Mune ino scan hapana kubiridzira mureza. Pane kudaro, ICMP inoshandiswa kuona kana chiteshi chakavhurika kana kwete. Nekudaro, kana packet rikatumirwa kuchiteshi uye iyo ICMP port isingawanikwe packet inodzoserwa, zvinoreva kuti chiteshi chakavharwa. Kana, zvisinei, pasina mhinduro, saka chiteshi chakavhurika.
SSDP uye Chinyorwa Kuongorora
SSDP, kana Rakareruka Service Discovery Protocol, sevhisi inopindura mibvunzo inotumirwa pamusoro pe IPv4 uye IPv6 nhepfenyuro kero. Varwisi vanoshandisa iyi scan kushandisa UPnP kusagadzikana uye kuita buffer kufashukira kana DoS kurwisa. Rondedzero yekutaurisa zvisina kunangana inowana mauto. Iyi scan inoshanda nekunyora kunze IP kero nemazita pasina kubaya iwo mauto uye nekuita reverse DNS resolution kuti uone mazita eanogamuchira.
renyeredzi s7 kumucheto vs htc 10
iphone 8 sirivheri vs nzvimbo grey
Iko iPhone 11 Pro Max inokosha kutenga muna 2021?
Verizon vs T-Mobile vs AT & T: ndeipi network ye5G inokurumidza mune aya mashanu maguta makuru?
AT & T & apos; yakagadziridzwa Samsung Galaxy Note 4 inorangarirwa nekuda kwemabhatiri enhema
iOS 15: Ungadudzira sei chero chinyorwa pane yako iPhone
Apple Pay vs Samsung Kubhadhara vs Android Pay: kuenzanisa
Maitiro ekudzima anotsamwisa zviziviso mu Android
Microsoft inozopedzisira yaburitsa yakabatana Hofisi Anwendung yePad
Fitbit inoburitsa OS 5.0, asi maviri chete smartwatches anoenderana